जीवनी - विकिपिडिया
कुनै व्यक्तिको जीवनलाई छर्लङ्ग पार्ने गरी लेखिएको क्रमबद्ध लेख
जीवनी भनेको कुनै व्यक्तिको जीवनलाई छर्लङ्ग पार्ने गरी लेखिएको क्रमबद्ध लेख हो । जीवनी मानिसले जीवनभरि गरेका कामकुराहरूको अभिलेख हो । साहित्यकै अङ्ग मानिने जीवनीलाई जीवन चरित्र वा जीवन चरित पनि भनिन्छ । जीवनीमा विशेष व्यक्तिको जीवनमा घटेका घटनाहरू तथा चरित्र, पेस आदि महत्त्वपूर्ण अंशहरू टिपेर उसले समाजमा दिएको योगदान लेखी त्यसको मूल्याङ्कन पनि समावेश गरिएको हुन्छ । राष्ट्र र मानव समाजकै उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण देन दिने विशिष्ट व्यक्तिको जीवनी लेखिन्छ वा पढिन्छ ।
जीवनीले व्यक्तिको समग्र प्रामाणिक चिनारी दिने भएकाले जीवनी लेखकले सम्बन्धित व्यक्तिसित सम्बन्ध राख्ने विभिन्न सामग्रीहरू उपयोग गरेको हुन्छ । जीवनी लेख्ता दैनिकी, चिठी, अभिलेख, उसका साथीहरूको संस्मरण, उसका बारेका पुस्तकहरू, फोटा तथा तस्वीर र अन्तर्वार्ताबाट उससम्बन्धी आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान आवश्यक पर्दछन् । यहाँ लेखिने जीवनी भनेको पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको जीवनी नै हो, जसका लागि आवश्यक बुँदा टिपोट गरिएको हुन्छ ।
१ जीवनी लेख्ने तरिका
२ जीवनी लेखनको नमुना
जीवनी लेख्ने तरिकासम्पादन
दिइएका बुँदाहरूलाई विभिन्न उपशीर्षकहरूमा बाँड्नुपर्छ, जस्तै :
जीवनी लेखनको नमुनासम्पादन
बुँदाहरूका आधारमा लेखिएको मोतिराम भट्टको सङ्क्षिप्त जीवनी
युवाकवि, मोतिराम भट्ट
वि.सं. १९२३ भाद्र कुशे औँसीका दिन काठमाडौँको भोसिको टोलमा जन्म
पिता, माता दयाराम भट्ट र रिपुमर्दिनी देवी
६ वर्षको उमेरमा आमासँग बनारस प्रस्थान
बनारसमा संस्कृत र फारसी भाषाको अध्ययन
त्यहाँ गायन र वाद्यवादन सिकेका
वि.सं. १९३७ मा नेपाल आई विवाह गरेका
१९३८ मा फेरि बनारस गई अङ्ग्रेजी पढ्न सुरु गरेका
नेपालीमा गजल र समस्यापूर्ति कविताको आरम्भकर्ता
नेपालमा भारतजीवन नामक प्रेस स्थापना
भानुभक्तीय रामायणको बालकाण्डको प्रकाशन
गोरखा भारत जीवन नामक नेपाली भाषाको पत्रिका प्रकाशन
बनारस र काठमाडौँमा मोती मण्डलीको स्थापना
कवि, गजलकार, नाटककार, जीवनीकार, समालोचक, पत्रकार, खोजकर्ता आदि बहुमुखी व्यक्तित्व
भाषाप्रेमी, देशप्रेमी, सौन्दर्यका प्रसिद्ध कवि, अग्रजको सम्मान गर्ने
प्रमुख कृतिहरू - 'प्रह्लाद भक्तिकथा', 'पीकदूत', 'उषाचरित्र', 'प्रियदर्शिका नाटिका', 'शकुन्तला', 'भानुभक्त आचार्यको जीवनचरित्र'
वि.सं. १९५३ मा मृत्यु
युवाकवि मोतिराम भट्ट
नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा युवाकविका नामले चिनिने मोतिराम भट्टको जन्म वि.सं. १९२३ कुशे औँसीका दिन काठमाडौँको भोसिको टोलमा भएको थियो । उनका बुबाको नाम दयाराम भट्ट तथा आमाको नाम रिपुमर्दिनी देवी थियो ।
मोतिराम भट्ट छ वर्षकै कालिको उमेरमा आमासँग बनारस गए । उनी बनारसमै बसी संस्कृत र फारसी भाषाको अध्ययनमा लागे । त्यहाँ उनलाई गायन तथा वाद्यवादन सिक्ने अवसर समेत प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपाल फर्केर उनले वि.सं. १९३७ मा विवाह गरे । विवाह गरेको एक वर्षभित्रै वि.सं. १९३८ सालमा पुनः बनारस गई अङ्ग्रेजी पढ्न थाले । यसरि विभिन्न क्षेत्रमा उनको अध्ययनको काम अघि बढ्यो ।
मोतिराम भट्टले नेपाली साहित्यको विकासका लागि धेरै पक्षबाट सिर्जनात्मक कामहरू आरम्भ गरे । उनले नेपाली काव्यजगतमा गजल र समस्यापूर्ति कविता सुरु गरे भने अरूलाई लेखनतर्फ आकर्षित पनि गरे । स्वदेशबाटै पुस्तक प्रकाशन सम्भव होस् भन्ने अभिप्राय राखी उनले नेपालमा भारतजीवन नामक प्रेस स्थापना गरेर आदिकवि भानुभक्तको रामायणको 'बालकाण्ड' छपाए । त्यसै सिलसिलामा उनले 'गोरखा भारत जीवन' भन्ने नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका समेत चलाएर नयाँ परम्परा भित्र्याए । उनले कविहरूलाई भेला पारेर कविता सुन्ने र प्रेरणा दिने उद्देश्य राखेर बनारस र काठमाडौँमा मोती मण्डली नामको कविहरूको समूह स्थापना गरी एउटा जोसिलो साहित्यिक वातावरण खादा गरे । उनले 'पीकदूत' जस्तो उत्कृष्ट काव्य, 'शकुन्तला' नाटक, 'भानुभक्त आचार्यको जीवनचरित्र' शीर्षकको जीवनी तथा समालोचना लेखेका छन् । यीबाहेक उनका अन्य कृतिहरूमा 'प्रह्लाद भक्तिकथा', 'उषाचरित्र', 'गजेन्द्रमोक्ष', 'प्रियदर्शिका नाटिका' आदि पर्दछन् ।
युवाकवि मोतिराम भट्टले छोटो आयु पाए तापनि उनको नेपाली भाषा र साहित्य प्रतिको प्रेम र आफूभन्दा अग्रजको सम्मान गर्ने बानि हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण प्रेरणाका स्रोत हुन् । उनले साहित्यका क्षेत्रमा कवि, गजलकार, नाटककार, जीवनीकार, समालोचक, पत्रकार तथा खोजकर्ताको रूपमा सफलतापूर्वक काम गरेका छन् । यस्ता बहुमुखी प्रतिभा भत्ताको मृत्यु वि.सं. १९५३ सालमा तीस वर्षकै युवा कालमा भएको थियो ।
विकिमिडिया कमन्समा जीवनी सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=जीवनी&oldid=922513" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १४ सेप्टेम्बर २०२०, २२:०९
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:०९, १४ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।